ဓမ္မစကြာ တရားတော် | မေတ္တာရိပ်
← ပညာရှိ နှင့် သူမိုက် ခွဲခြားနည်း
အခွင့်အရေးနဲ့ တာဝန် →
ဓမ္မစကြာ တရားတော်	Posted on August 22, 2009	by mettayate အနန္တ ကျေးဇူးရှင် ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ဘုရားဖြစ်ပြီးခါက ပဉ္စ၀ဂ္ဂီ အား ဟောကြားခဲ့သော ပထမဦးဆုံးတရားဖြစ်ပါတယ်။ ထိုပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးဦးတွင် ကောဏ္ဍည သည် ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိသော တရားအလုံးသုံသည် ချုပ်ခြင်းသဘောတရားရှိ၏ ဟူသော ကိလေသာမြူအညစ်အကြေးကင်းသော တရားမျက်စိ သောတ္တိမဂ်ဉာဏ်ဖြင့် သောတပန်တည်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အရှင် ကောဏ္ဍည သည် ရဟန်းအဖြစ် တောင်းဆိုကာ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား၏ ပထမဆုံးသံဃာရတနာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး – ဓမ္မစကြာရွတ်ဆိုမှုနှင့် အနတ္တလက္ခဏာသုတ်
ဓမ္မစကြာ ပါဠိ ဘာသာပြန်
အနတ္တ လက္ခဏသုတ် ပါဠိ ဘာသာပြန်
အရှင် ဇနကာဘိဝံသ – ဓမ္မစကြာတရားတော်နှင့် အနတ္တလက္ခဏသုတ်တရားတော်
This entry was posted in တရားတော်များ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← ပညာရှိ နှင့် သူမိုက် ခွဲခြားနည်း